Ghostwriter Sayniska Siyaasadeed Waxaan hadda helayaa taageero waraaqo ah
Qorayaashayagu waxay ku leeyihiin khibrada lagama maarmaanka u ah cilmiga siyaasada
Khibrad ayaa muujisay in qaybtaada cilmi baarista ay tahay mid ka mid ah koorsooyinka ay iska diiwaan geliyaan tiro ka badan isku celcelis arday ah. Waxaan kugu taageeraynaa abuuritaanka noocyo shaqo oo kaladuwan. Mawduucyadeena mawduucyada mawduucan ayaa si ballaadhan u ballaadhan. Adeegyadeenna ghostwriter waxay leeyihiin faa iidada aan ku shaqaaleysiin karno tiro badan oo qorayaal ah amarada tirada badan awgood. Waxaan ku dabooleynaa dhammaan qaybaha cilmiga siyaasadeed ee khabiir ku habboon. Faa'iido go'aan qaadasho ah oo adiga kaa sareysa wax walba. Adiga macmiil ahaan, waxaa laguu xil saari doonaa maareeye shaqsi ah oo ka jawaabi doona dhammaan su'aalahaaga.
Waxaan kugu taageeri karnaa shaqada cilmiga. Qorayaasheennu waxay si dhakhso leh u aqoonsadaan cilaaqaadka sidaas darteedna waxay keenaan tayo wanaagsan. Waan caawin karnaa ardayda. Waxaan u shaqeynaa si waafaqsan heerarka sayniska iyo adeegsiga hababka falanqaynta dhexe ee cilmiga sayniska, tusaale ahaan. B. falanqaynta aaga siyaasada ama makiinada xisbiyada sida ku cad Sartori. Qeybta hoose ee xiriirka caalamiga ah, waxaan ku dabaqeynaa fikradaha fikradaha aasaasiga ah ee xoriyada, dhisida bulshada, ama neorealism. Waxaan sidoo kale caan ku nahay qaabab gaar ah, sida B. "Iskuulka Ingiriisiga", waaqica dhabta ah sida laga soo xigtay Morgenthau ama neorealism-ka iskuulka Munich. Aqoonteenna dhaqaale, ayaan kugu caawin karnaa helfen. Jihaynta maadooyinka kala duwan ee cilmiga siyaasada awgood, waxay dhacdaa inaad sidoo kale saameyn ku yeelato meelaha kale ee wax lagu barayo, tusaale ahaan. B. Dhaqaalaha, waa in si cilmiyaysan looga faa’iideysto. Adiga ayaa gacanta kuugu jira haddii aad wax su'aalo ah qabtid. Mawduucaagu waa xooggeenna. Shaqada tacliimeed waa inaad u isticmaashaa wakaaladdayada 'ghostwriter'. Qoritaanka qoraalkaaga ayaa kuu badbaadin doona waqti iyo shaqo. Qorayaasheennu waxay ku damaanad qaadayaan tayada. Qorayaashayagu waxay qoraan shaqadaada. Adeegsiga adeegyadeena ayaa kaa caawin doona waxbarashadaada. Xitaa adiga leh Warqad aqoon kororsi ah oder Maqalka waan ku taageersanahay. Aqoonyahan cirfiid aqoonyahan ah ayaa shaqada kuu qaban doona. Si loo soo gudbiyo shaqada sayniska, shaqo badan oo hordhac ah waa in la qabtaa. Marka lagu daro baaritaanka ilaha la isticmaali karo iyo suugaanta takhasuska leh, waa inaad ka sareysaa dhamaanba inaad fiiro gaar ah u yeelato codsiga saxda ah ee aragtida sida saxda ah loo soo bandhigay. Mawduuca cilmiga siyaasada, waxaa muhiimad gaar ah leh in fiiro gaar ah loo yeesho dooda caqliga iyo cilmiga ku dhisan. Shaqada anshaxa oo leh waxyaabo sharraxaad u badan leh waa in laga fogaadaa! Hubinta khayaanada ayaa dabcan sidoo kale daboolay adeeggayaga! Ugu dambeyntiina, markaad noo shaqaaleyso qoraa ahaan, waxaad ka faa'iideysanaysaa wax kasta oo ka wanaagsan kuwa caddaaladda ah Qiimaha iyo tayada wanaagsan! Si aad ugu guuleysato koorsada, dhammaan qaybaha waa in dabcan la gudbiyaa. Tani aad ayey ugu adagtahay qaybo ka mid ah maadama maadooyinkan la baaray. Ku gudubka maadada noocaas ah ayaa ah tan ugu fiican ee kugu dhici karta. Laakiin waxaad u baahan tahay waqti kugu filan iyo dukumiintiyada lagama maarmaanka ah iyo mashquul la'aan. Waan ku gaarsiineynaa shahaadada bachelor, shahaadada Masterka, shahaadada Masterka, Qoraal ama qoraalka.
Qoraal-gacmeedka cilmiga siyaasadda
Qoraal-gacmeedku wuxuu leeyahay faa iidada aad xoogga saari karto hawlaha muhiimka ah ee muhiimka ah isla markaana aad noogu soo wareejiso kuwa aan muhiim ahayn. Waxaa jira bulsho waxqabad leh oo dhan dhinacyada taas oo ah guusha laga gaaro iskuulka aasaaska udub-dhexaadka u ah. Waxaan kugu taageeraynaa qoraal ahaan shahaadada bachelor, shahaadada Masterka beziehungsweis in Shaqada guriga iyo bandhigid. Waxaan sidoo kale kuu sameyn karnaa qiimeyn xagga tirakoobka ah oo aan kula sameyno adiga SPSS. Waxaan leenahay qaababka karti. Sida shuraako karti leh, waxaan sidoo kale garab taaganahay arrimaha bulshada.
Barashada cilmiga siyaasada
Waxaan uga jawaabnaa dhammaan weydiimaha gaarka ah ee macaamiisha iyadoo loo marayo taageerada shaqsiyadeed ee dhow. Tani waxay ka dhacdaa dhammaan waaxaha. Adigana adiguba, dabcan. Waxaan kaa caawineynaa raaxada. Daabacaad cilmiyeed ayaa qaadata waqti dheer. Na sii amarka aan ku abuureyno shaqadaada. Samee kanaga baaritaan macaamiisha oo waxaan kuu samayn doonnaa dalab si gaar ah ugu habboon baahiyahaaga!
Sayniska Siyaasadeed ee Nolosha Xirfadeed
Kadib xirfadaada waxbarasho waxaad bilaabeysaa noloshaada xirfadeed. Tababbarkaaga waxbarasho waxaad ku qaadan kartaa xirfado kala duwan. Tusaale ahaan, waad geli kartaa siyaasada ama waxaad si firfircoon uga caawin kartaa qaabeynta adoo ka shaqeynaya xisbiyada siyaasadeed ama xafiisyada baarlamaanka. Fursado shaqo oo dheeri ah waxaa laga heli karaa aasaaska caalamiga ama ururada aan dawliga ahayn. Xirfad saxaafadeed ayaa sidoo kale la tixgelin karaa, tusaale ahaan. B. sida khabiir ku takhasusay siyaasada. Ardayda jaamacadaha sidoo kale waxaa badanaa lagula taliyaa inay ka tashadaan aragtida oo ay tixgeliyaan meelaha diiradda siyaasadeed la saarayo.
Sayniska siyaasadeed ee shirkadaha ganacsiga
Waxaa jira arrimo siyaasadeed labadaba gobolada iyo shirkadaha. Wadahadalka siyaasadeed waa in lagu qabtaa jihooyin kala duwan. Badanaa dano dhaqaale ayaa ka dambeeya. Arimaha dhaqaalaha ayaa ka dhasha isku dayga balaarinta shirkadaha. Cilmiga siyaasada waxaa inta badan laga heli karaa dhanka xiriirka dadweynaha iyo u ololeynta.
Hubinta tayada ee dhanka cilmiga siyaasada